Yun Xie·“Ubuntwana” Zhongshan Road Lake View Room/With Courtyard/Near Metro Lines 1 kanye 2/Giant Screen Projection/Ezokuthutha Elula Enkabeni Yedolobha Elidala
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-云歇
*Le invoyisi yekhaya ikhishwa inkundla, sicela uyibheke lapho ufaka i-oda
*Uma kungahloliwe, ngeke sibe nesibopho sokuthola isitolo sethu ngemva kwalokho! Wonke umuntu umdala, ngicela uziphendulele ngezenzo zakho
*Uma uthola izinkinga ngesikhathi sokungena, sicela uxhumane nesevisi yamakhasimende kusenesikhathi. Uma isikhathi sesihambile, sicela usithinte! Okokuqala ku-villain, bese kuba umnumzane, ngiyabonga ngokuqonda kwakho, futhi sicela ungashiyi izingozi ezifihliwe ezingxabano!
Phansi kunomgwaqo ochumile we-Zhongshan, onokuthula phakathi nendawo enomsindo, obheke ichibi, futhi ujabulela ithala elikhulu! Ifakwe izindawo zokuwasha nezomisa, ukuze ungabi nazinkathazo ohambweni lwakho.
Ulayini woku-1 nowesi-2 womgwaqo u-Zhongshan osenkabeni yedolobha wonke useduze, futhi ukuhamba kwezimoto kulula! Kunamatiyetha wama-movie, amagumbi ayimfihlo nezinye izisekelo zokudlala ezisemfashinini esakhiweni, ukuze ujabulele ukuchuma ngaphandle kokushiya isakhiwo.
Hlala uxhumene nezivakashi noma nini ngesikhathi sokuhlala kwakho
U云歇 Ungumbungazi ovelele